Blockchain News 06.06.2018 - Blockchain News
Chikumi 6, 2018 arun
Indian Police Bust Kwakakura Crypto-kwakavakirwa Ponzi Scheme
The Ponzi chaiva zvirongwa anoverengeka pedyo Dr. Amit Lakhanpal, CEO of Money Trade Coin Group uye CMD of Flintstone Group. Machinda akati kuti Lakhanpal akanga asika munhu cryptocurrency yainzi Mari Trade Coin (MTC), zvaakanga zvikuru kutengeswa kune yakakura Indian munharaunda kuti akwezve vanoita kupinda dzimwe dzokufungidzira zveefa. An hofisi Orion Business Park aiva ne Flintstone Group Real Estate kukura sangano anonzi “nechepakati kubiridzira” netsvimbo kwayo orchestrating ruzhinji scams izvi kwokunyepedzera; The vasingafungiri vanoita “gumi kusvika makumi maviri kanomwe chete mana mitanhatu,” anoshuma Times Of India. Pakataurwawo kuti vamwe vanoita vakatourayiwa akavimbisa Caribbean citizenship, Real Estate uye bhangi Swiss nhoroondo mukutsinhana inivhesitimendi kwavo.
Zvinofungidzirwa kuti nokukosha mari inowanikwa ichi kunopindirana Ponzi kwava anenge 500 crore, izvo anoenzanisa kuti $ 6,699,450,000.
Munguva bust, ari Thane mapurisa akasunga ndokusunga Taha Kazi, mumwe kiyi flanking wevanamakanika, asi achiri kutsvaka Lakhanpal nemamwe inofananidza zvina kiyi kubiridzira.
The Ponzi icho nezviremera zvomunzvimbo anotevera kunyunyuta kubva Delhi raMwari Kushandisa Director Pravin Agarwal mushure mekugamuchira hapana payouts kubva kambani. Mutevedzeri Mukuru wemapurisa Saravana Trimukhe akati:
“We Ainyora mhosva pana Chitalsar Police Station, apo vaipomerwa vakatenga imwe cryptocurrency mari, uye kunyengedzwa vanhu vanoverengeka.”
kubvira ipapo, mapurisa ikozvino pamutemo atara “nyaya kubiridzira, mhosva yokutyora, forgeries uye dzimwe nzvimbo akakodzera of IPC, kuwedzera Maharashtra Mutemo Chokudzivirira Vanofarira vanoita, 1999, uyewo pasi Information Technology Act”.
Huchiri haizivikanwi sei kure ichi Ponzi maitiro zvakakanganisa nharaunda, mapurisa mushumo kuti kunopamba rechipiri kuchaitika mune imwe hofisi Kailas Industrial Park, Mumbai.
After kusauka ichi, vazhinji zvino vanofunga kuti vanonyengedza ichi chikamu yakakura Ponzi uchishanda kubva Dubai. It achangobva akashuma kuti Lakhanpal yakatobuda partnered Zvake nokukwirira Sheikh Ahmed Bin Obaid Al Maktoum kuti Cabinet kuti kuumba “Al Teller Group,” mutsva Dubai anotsanangura Diamond wakakombama crypto startup. It ndehwokuti kusika blockchain zvinhu zviri rakachengetedzwa pamwe anokosha uye kunogona nhumbi kuburikidza mu-imba Exchange. Zvinonzi anokangaidza kuti Al Kasir Group yakatobuda kwakatangwa ayo “Pre Initial Blockchain Chakanaka Zvinopiswa” kuburikidza Al Kasir Group Portal, izvo kukwezva inivhesitimendi. Kana kutaura kuti izvi zviri chokwadi amai Ponzi kusvikira kumuduku thugs, anoramba kuti kuonekwa.
Kraken Daily Market Mushumo 05.06.2018
$158M nhumbi mhiri misika zvose nhasi
Ups Files bvumidzwa kugamuchira Bitcoin nokuda lockers
Global kutumirwa Gian ...
Bitcoin kutonga ra, ...
Previous Post:Blockchain News 05.06.2018
Next Post:Blockchain News 07.06.2018